Iibhloko zeNdlu yaseGadini ukusuka kuhola wendlela/edolophini - I-Airbnb
Iibhloko zeNdlu yaseGadini ukusuka kuhola wendlela/edolophini
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguSpencer
Indlu encinci encinci ebekwe kwiibhloko ezimbalwa ukusuka kumgwaqo omkhulu, edolophini naseRiversdale. Le ndlu incinci yeyona ndawo ifanelekileyo yokuchukumisa umntu ojonge indawo epholileyo kodwa efikelelekayo entliziyweni yeSaskatoon. Inesixeko esikhulu esizivayo kwi-suite, njengoko iyimizi-mveliso kodwa intle, inesilingi ezide ezivuthelweyo ezivumela ukukhanya okuninzi. I-suite incinci kodwa inezinto ezininzi eziluncedo ngobungakanani bayo. Ishawari eyahlukileyo kunye nendlu yangasese, indawo yekhitshi enokusetyenziswa (akukho oveni). Indawo yokupaka ezitalatweni iyafumaneka. QAPHELA: AYIKHO INDLU EYINKULU
LE YESIBILI YEGARDEN SUITE, umfanekiso wendlu enkulu kukuba uyazi ukuba injani indlu ekungeneni kwesitrato. Ukuqala nje ngokuba ngumamkeli ukuba uyazibuza ukuba kutheni ixabiso liphantsi, bhala ngoku ngaphambi kokuba linyuke! Akukho kubanjiswa, yindawo entle kwaye bendinabaqeshi bahlala ngokusisigxina ngaphambili. Ukuba uceba ukupheka ngelixa ulapho, undazise ukuze ndikubekele ipleyiti eshushu kwi-suite!
4.73 · Izimvo eziyi-139
IBroadway yindawo enefashoni eyibhulorho emfutshane kude nedolophu eneendawo ezininzi zokutyela kunye nokuthenga. Indawo engqonge i-Broadway yaziwa ngokuba yi-Prime Real Estate yase-Saskatoon, endinokuyiqinisekisa njengoko ndithengisa izindlu nezindlu!
Ndihlala kwipropathi kwaye ke nantoni na oyifunayo ngumyalezo nje kude, ndiyazazi zonke ezona ndawo zilungileyo zokutya okanye ukuya ikofu. Ndihlala ndikuvuyela ukunceda!